mubvunzo Prepar3D Help
Mazvita wakagamuchira: 44
2 makore 3 ago #19 by Dariussssss
Kana mukawana matambudziko, zvikanganiso kana imi mibvunzo vamwe pamusoro Prepar3D Simulator, kuposita pano. Uyewo inotiudzei nezvoUmambo unocherekedza negadziriso matambudziko akasiyana-siyana uye zvikanganiso zviri Simulator ichi.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Gh0stRider203
2 makore 2 ago #64 by lmaselli
Kutanga ndinoda kuzokorokotedza imi nokuda guru basa zvaunoita.
Mazuva mashoma apfuura ndakatanga kushandisa "P3D V3.4", The Muchiitiko chokutanga yakaiswa aiva "Balearic Island" uye ndakaona dambudziko pakukwirira munyika LEMH uye dambudziko nzvimbo LESL.
2 makore 2 ago #65 by Dariussssss
Hello uye anobvumirwa kwedu Forum.
Tichaita zvose zvatinogona kuti akubatsire nezvenyaya iyi. Kuti girl here kutorwa chimiro pano kana kumwewo?
2 makore 2 ago #67 by lmaselli
Yakanga kutorwa kubva peji ino. Balearic chitsuwa V2.
2 makore 2 ago #77 by quietflyerBob
compliments zhinji basa rako, naro 'rakanaka kwazvo chishandiso kwatiri! Ndava nechinetso vamwe wedzera-mberi, semuenzaniso ari Airbus A300 Multi livery rongedza; I 'Ve ndakagadza yangu Microsoft FS Directory, uye anoshanda kwazvo. Zvino, ini w'd kufanana hwokugadza zvakafanana rongedza muna P3D riri mune imwe Program Files (x86) zvakare, asi autoinstaller does'nt nditenderei kusarudza P3D. Zvisinei, ndava ndakagadza vamwe vakawanda Pack kubva Rikooo zvose Sims; chii chiri kunetsa? Thanks rubatsiro rwenyu
2 makore 2 ago #81 by Dariussssss
Sawa uye kugamuchira.
Ndakanga ichi ndege rongedza muna FSX uye zvakanga zvikuru zvakanaka.
Handina kuziva hwokugadzira chikamu P3D asi, zvinokwanisika kuti une yavairwisana izvi Sims mbiri vamwe kworudzii. Ini kuona pamusoro pics kuti chero kuti imi vaviri yakaiswa pamusoro chete panzvimbo ... haisi chinhu chakaipa kuti kwavari yakaiswa pamusoro akasiyana dzakaoma Zvifambiso, kana unogona kuzviita nenzira.
Time chokusika peji: 2.216 mumasekonzi